ShweMinThar: ဘာလဲဟဲ့ ISO
ISO လို့ International Organization for Standardization ခေါ်တဲ့ ကို ၁၉၄၇ ခုနှစ် Geneva,Switzerlandမှာ စတင်တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ မှတ်သားရပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ISOကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ စံချိန်စံညွန်းသတ်မှတ်ချက်များနဲ့အတူ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဦးတည်ပါတယ်။Standardသတ်မှတ်ချက်များကိုအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်လာခဲ့ရာက နေ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အဓိကထား သိကြတဲ့ (ISO 9001 ) တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကိုအဓိကထား ပြောရရင် ပြောင်းလဲလာတဲ့ ISO 9001 တွေကတော့
(ISO 9001:1987) Quality Assurance -20 Elements
(ISO 9001:1994) 20 Elements (Minor Change)
(ISO 9001:2000) Quality Management-process Approach
(ISO 9001:2008) Process Approach (Minor Change)
(ISO 9001:2015)High Level Structure
(Revision Planned -Major Change)
ISO 9001:2008နဲ့ 9001:2015 ပဲဖြစ်ပါတယ်။
2015 ကတော့ မစသေးပါဘူး။
2016 လာမယ့်စက်တင်ဘာလ မှာစတင်ပါတော့မယ် ။
ISO 9001:2008 မှာဆိုရင်တော့အဓိကအား Clause ကြီး (၈) ခုခွဲခြားထားပါတယ်။
Clause 3. Terms and Definitions ဆိုပြီးကနဦး မှာပါပါတယ်။
ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ လွှမ်းခြုံနိုင်မလဲ ၊စံချိန်စံညွန်းကိုးကားချက်တွေနဲ့သတ်မှတ်ချက်များနဲ
ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ ISO ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့
Quality Management Systemsဆိုပြီး စတင်ပါဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
Clause 4. Quality Management Systems
ဒိအပိုင်းမှာတွေမှာတော့ General Requirement (အထွေထွေလိုအပ်ချက်) Documentation Requirement (စာရွက်စာတမ်း ပြင်ဆင်လိုအပ်မှု) Quality Manual(အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်၊မှတ်တမ်းများ
ထိန်းသိမ်းခြင်းတွေပါဝင်လာပါတယ်။ဒါတွေကို ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမယ် ၊ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းတွေကို အဓိကထား ပါဝင်ပါတယ်။
Clause 5.Management Responsibility
စီမံခန့်ခွဲသူများရဲ့ တာဝန်ရှိမှု၊တာဝန်ယူမှုအပိုင်းအနေနဲ့ ပါဝင်ပါတယ်။စီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့ ကတိဂဝတ်တွေ ၊ဖောက်သည်များအပေါ်အားရုံစူးစိုက်မှု ၊အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ပေါ်လစီတွေအပြင် အပိုင်းတွေပါ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။နောက်ပြိး အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက် ၊ရည်မှန်းချက်များပါ Planning ပါပါတယ်။နောက်ပြီးတာဝန်ခံမှုနှင့်အတူ လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အာဏာများ၊အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဆက်ဆံရေး Management Review လုပ်ရမယ့်အစီအမံတွေလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်။
အပိုင်း (၆)မှာတော့ အရင်းအမြစ်များ အတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေပါဝင်ပါတယ်။ အရင်းအမြစ်များအတွက်ပြဌာန်းချက်များ (Provision of Resources ) (Human Resources ) (လူသားအရင်းအမြစ်) G(Infrastructure)(အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ) (Work environment) (လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင် )ဆိုတဲ့ အပိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ် ။ဒါတွေကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမလဲဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရေးဆွဲရမှာပါဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအပိုင်းကတော့ ထုတ်ကုန်များကို လေ့လာသုံးသပ်ရတဲ့အပိုင်းပါ။ဒီအတွက် အစီအစဉ်တွေချမှတ်ရေးဆွဲရပါတယ်၊နောက်ပြီး သုံးစွဲသူများနဲ့ ဆက်ဆံရေးထုတ်ကုန်ရဲ့အပြင်အဆင် အပိုင်းတွေ ၊ကုန်ကြမ်း ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ ၊ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဘယ်လိုအရည်အသွေးပြည့်မီအောင် သတ်မှတ်မလဲဆိုတာတွေပါ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရမယ့်အပိုင်းပါ။ လိုအပ်တဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေ ၊ထောက်ပံရေးပစ္စည်းတွေကို ထိန်းချုပ်ကိုင်တွယ်ဖို့ အစီအမံများလည်း လိုအပ်ပါတယ်။
Clause 8. Measurement , Analysis and Improvement
နောက်ဆုံးမှာတော့ တိုင်းတာလေ့လာမှုတွေ၊ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနဲ့ တိုးတတ်ရေးအတွက် အစီအမံများပါဝင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူသူများရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ၊အဖွဲ့အစည်းအတွင်းလုပ်ငန်း စဉ်များအားစိစစ်စစ်ဆေးခြင်း၊လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို တိုင်းတာဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင် ထုတ်ကုန်များအပေါ် အရည်အသွေးသတ်မှတ်တိုင်းတာခြင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးအရည်အသွေးပြည့်မီကြောင်းသက်သေပြလို့မရနိုင်တဲ့ထုတ်ကုန်များကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းမလဲဆိုတာတွေ၊အချက်အလက်များအပေါ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးသပ်လေ့လာခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတတ်ဖြစ်ထွန်းစေဖို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်အစီအမံတွေ၊ အမှားအယွင်းပြင်ဆင်ချက်တွေအပြင် ကြိုတင် ကာကွယ်ဆောင်ရွက်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ရမယ့်
တကယ်တော့ ISO Procedure ဟာဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းအတွက် တိကျတဲ့စနစ်တကျစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများနဲ့အရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့ ထုတ်ကုန်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြစ်စေဖို့
QMS (Quality Management Systems) အဖြစ်ထိန်းကြောင်းတည်ဆောက်ထားတာပါ။
ဒါကိုဆောင်ရွက်နိုင် ရင် အရည်အသွေးမီတဲ့ ထုတ်ကုန်နဲ့
ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ISO အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရယူထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ ဒီစနစ်အကြောင်းအရာတွေကို အခြေခံပြီး ကိုယ်ရဲ့ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝနဲ့လိုက်ပြီး ဆောင်ရွက်မှုတွေကို ပြဌာန်းရေးဆွဲထားရပါတယ်။အဓိက ကျတဲ့ Main Clause
များအတိုင်း အစီအစဉ်တကျဆောင်ရွက်ခြင်းရှိမရှိ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း Internal Auditထားရှိပြီး နှစ်ဝတ်တစ်ကြိမ်လောက်စစ်ဆေးပါတယ်
။နောက်ပိုင်းမှာတော့ ISO အဖွဲ့အစည်းက လာရောက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေ လွှဲမှားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊လိုအပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအသိပေး ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်စေပါတယ်။
QMR (Quality Management Representative ) ထားရှိဆောင်ရွက်စေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာတွေကတော့
ISO 9001:2008 မှာပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အပြောင်းအလဲဆိုတာ ရှိနေသမျှ လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းဟာ ပြောင်လဲလို့နေပါတယ်။ နောက်ပြီး ISO ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် ၊လုပ်ဆောင်ချက်များနဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်များ ဟာလည်း ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်လို့ ISO 9001:2015 မှာလည်း အပြောင်းအလဲတစ်ချို့ပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။
9001:2015 မှာတော့ Clause (၈) ကနေ Clause (၁၀) ခုဖြစ်လာပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာ Clause (၁) (၂) (၃) ကတော့ ပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူး ။
Clause 4. Context of Organization
အဖွဲ့အစည်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲပတ်သတ်ပြီးပါဝင်ပတ်သတ်သူများသိရှိဆောင်ရွက်ရမယ့်အပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြသာနာအရင်းအမြစ်တစ်ခုကိုပြီးပြတ်သောရလာဒ်များရရှိလာတဲ့အထိဆောင်ရွက်စီစဉ်ထားရှိရမယ့်အပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းက ပြသာနာအရင်းအမြစ်တွေ ၊အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဆက်စပ်နေသူများထံ နှင့်ပြင်ပက လာတဲ့ ပြသာနာ အရင်းအမြစ်များအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ လိုအပ်ကြောင်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး QMA ဖြန့်ကျက်ထားနိုင်တဲ့ နယ်ပယ်အကျယ်အဝန်းကိုလည်း ဆုံးဖြတ်နိုင်စေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်မူထားခြားပါဝင်လာတာက Leadership ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာတော့ ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ ကတိကဝတ်များ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်၊ဖောက်သည်များအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုတွေ တိုးတတ်ဖြစ်ထွန်းလာမယ့် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ပေါ်လစီတွေ၊အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အဆင့်အတန်းနဲ့ တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှု တွေအပြင် အခွင့်အာဏာခွဲဝေသုံးစွဲရေးတွေအတွက်ပါ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် အစီအမံများ ရေးဆွဲရမယ့် အပိုင်းပါ။
စီမံကိန်းတွေရေးဆွဲရေးအတွက် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ၊ရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ့် စီမံကိန်းတွေရေးဆွဲပြင်ဆင်ရေး ၊ရေးဆွဲထားတဲ့ စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီး အမှန်တကယ် ရယူပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်မှုရှိမရှိ၊ ရရှိအောင်လည်း ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ အပိုင်းတွေကို ပြင်ဆင်ထားရမှာပါ။plan , Do ,Check ,Action အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းများကိုလည်း ပြောင်းလဲမှုအတိုင်း လိုက်ပါပြောင်းလဲဆောင်ရွက်စေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်အပိုင်းတွေအနေနဲ့တော့ အရင်းအမြစ် သွင်းအားစုတွေ၊အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ နဲ့ အတူ
Competence , Awareness Communication , Documented information တွေပါ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Control of documented information လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပါ ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ISO 9001:2008 မှာဆိုရင်တော့ Clause6မှာလည်း ဒီအပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်။
Operation အပိုင်းအနေနဲ့ Clause 8 မှာပါလာတာတွေကတော့ Planning and Control , Requirements for Products and Serviceတွေအပြင် ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်ဆံရေး၊ထုတ်ကုန်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုများရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုအပေါ် ပြန်လည်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်စာရွက်စာတမ်းများထိန်းသိမ်းမှုတွေနဲ့အတူDesign and Development for Product & Services တွေပါဝင်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ ထုတ်ကုန်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်မှာ ဆောင်ရွက်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပုံတွေ အပြင် ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ပြဌာန်းချက်တွေထားရှိဆောင်ရွက်ခြင်းများပါဝင်ပါ တယ်။ဒီအပိုင်းကထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အဓိကဆောင်ရွက်ရမယ့်အပိုင်းအဖြစ်အများဆုံးပါဝင်တာကိုလည်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။
9001:2008 မှာပါဝင်တဲ့ Clause 8.Measurement , Analysis and Improvementကို 9001: 2015မှာ Clause 8 &9အဖြစ်ခွဲခြားထားတာကိုအကြမ်းအားဖြင့်တွေနိုင်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာက Monitoring , Measurement , Analysis and evaluation တွေ အဓိကထားပါဝင်လာပါတယ်။ နောက်ပြီး Internal Audit , Management Review တွေလုပ်ရမယ့်အပိုင်းပါ။
နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အပိုင်းမှာတော့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့ တိုးတက်ဆောင်ရွက်မှုတွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ Continual Improvement ဖြစ်စေဖို့ လုပ်ဆောင်ရမယ် Nonconformity and Corrective actionတွေဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ အဖွဲ့အစည်းကို စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတတ်စေဖို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါ။
ISO 9001:2008 နဲ့ 2015 မှာ အသုံးအနှုန်းတွေအပြင် အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းပြီး အကျယ်ချဲ့ထားတဲ့အပိုင်းတွေလည်းကွာခြားသွားပါတယ်။နောက်ပြီးRisk management လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် Risk base Thinking , Risk base Assessment တွေ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ Proactive and reactive များအတွက်တွေပါခွဲခြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စနစ်တစ်ခု တည်ဆောက်ရာမှာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းရေးအတွက် ရေရှည်ဆောင်ရွက်သွားစေနိုင်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုတကယ့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရင် ကောင်းမွန်မှာပါ။
ISO Certificate ရရှိရေးအတွက် အလေးထား
ဆောင်ရွက်ပြီး ISO ကို Marketing Tools အဖြစ်အသုံးပြုလာကြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
နောက်ပြီး ISO process တွေဆောင်ရွက်မယ့် လုပ်ငန်းစဉ်က
သီးခြား ထားရှိပြီး၊ပုံမှန်လည်ပတ်မယ့် SOP တွေနဲ့ လည်ပတ်နေတာလည်းရှိနေတာလည် တွေ့ရပြန်ပါတယ်။
ISO ဆိုအလုပ်ရှုပ်တယ် ၊စာရွက်များတယ်ဆိုပြီး စိတ်ပျက်ပြောဆိုလာကြတာလည်းရှိနေကြတာပါ။
အခုနောက်ပိုင်းတော့ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာအရ စာရွက်စာတမ်းစနစ်တွေ လျော့ချပြီး Computerized and electronic systems များအသုံးပြုလာကြမယ့်လို့ ဆိုထားပေမဲ့ Resources & Technology အသုံးပြုမှုစနစ်တွေကိုဝန်ထမ်းတွေ ကျွမ်းကျင်မှုနည်းပါးနေခြင်းနဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်ရင် လတ်တလော အနည်းငယ်တော့ ခက်ခဲနေဦးမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံနှုန်းများနဲ့ လုပ်ဆောင်ကြမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ကတော့ ISO အနေနဲ့
QMS (Quality Management Systems)လည်ပတ်စေဖို့
ကတော့ အသေအချာပါပဲ ။ TQM (Total Quality Management )
ဖြစ်စေဖို့ဆိုတာကအချိန်၊အရင်းအမြစ်ဝန်ထမ်းများ ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်လုပ်ကိုင်နိုင်စေဖို့လိုအပ်တာမို့ ISO ဆိုတာကို စာရွက်ပေါ်မှာမဟုတ်ပဲ တကယ်လက်တွေ့အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရင်တော့တိုးတက်မယ့် အဖွဲ့အစည်း